DHEGEYSO-Reer Beledweyne oo dalbaday in gobolkooda labo laga dhigo. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Reer Beledweyne oo dalbaday in gobolkooda labo laga dhigo.
Agoosto 13, 2016 4:28 b 0
Beledweyne, Aug 13 2016–Dhawaan Waxaa lashaaciyay inshirkii Dhismaha Maamulka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe lagu Qaban Doono Magaalada Muqdisho, urur Goboleedka IGAD iyo dawlda soomaaliya ayaa la sheegay in ay Qorsha haasi soo jeediyeen.
Hadaba Waxaa Go,aanadaasi kasoo horjeestay odayaasha dhaqanka ee Gobolka hiiraan . Nabadoon Maxamed Cabdi Raaxey waxa uu kamid yahay nabadoonadii Go,aankaasi kasoo horjeestay Waxaan uu sheegay in laba gobol waxaan ahay in aysan aqbalaynin.
Wariye Xasan Heykal oo kusugan Daljir Bosaaso ayuu uwaramay